I-YIWU, China, Meyi 12, 2020 / PRNewswire / - Ngomhla we-10 kuMeyi 2020, umsitho okwi-intanethi u-2020 uSuku lweBrand China wakhatywa.
Ixesha Post: Jun-02-2020
I-YIWU, China, Meyi 12, 2020 / PRNewswire / - Ngomhla we-10 kuMeyi 2020, umsitho okwi-intanethi u-2020 uSuku lweBrand China wakhatywa. Njengomsitho obalulekileyo wokuphawula uphawu rhoqo ngonyaka kwintengiso ye-Yiwu, uKhuphiswano lweYiwugo oluPhezulu lwabathengisi nalo luqalise ngokusesikweni inkqubo yokuvota. ...Funda ngokugqithisileyo »
Iphehlelele inkuthazo yokuphakamisa ukuthengisa iimoto ukuze isombulule ifuthe le-COVID-19's kwintengiso yemoto yasekuhlaleni.
IShanghai (iGasgoo) -I-Yiwu, eyamkelwe njengeyona marike inkulu yorhwebo lwehlabathi, isungule inkuthazo yokuphakamisa ukuthengiswa kweemoto ukuze icime ifuthe le-COVID-19 kwintengiso yemoto yasekuhlaleni. Okubiza kakhulu imoto ...Funda ngokugqithisileyo »
Zhongnan Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd. yasekwa ngo-2011
Zhongnan Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd. yasekwa ngo-2011 kwaye ibekwe ehlabathini-ezaziwayo-kakuhle kumazwe amancinci isixeko yorhwebo-Yiwu, China Eli shishini unyanzelisa ekudaleni projekthi ulwaneliseko umthengi qu-class lokuqala ...Funda ngokugqithisileyo »